नियमित अनुगमनसंगै सिकाई उपलब्धीमा सुधार « Anumodan National Daily
नियमित अनुगमनसंगै सिकाई उपलब्धीमा सुधार
प्रकाशित मिति :7January, 2018
धनगढी । शिक्षा सरोकार समूहको नियमित निगरानी र अनुगमनसंगै कैलालीका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा सिकाई उपलब्धीमा सुधार हुनुको साथै शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति पनि नियमित हुन थालेको छ ।
शिक्षा सरोकार समुहले कैलालीको उर्मा, फूलबारी र हसुलियाका सामुदायिक विद्यालयमा निगरानी तथा अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ उर्मीस्थित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका अभिभावहरूले गठन गरेको शिक्षा सरोकार समूहका संयोजक रामसिंह रानाले नियमित अनुगमन र छलफलले विद्यालयमा सिकाई उपलव्धीमा सुधार आउनुका साथै शिक्षक र विद्यार्थीको उपस्थिति समेत नियमित भइरहेको बताए ।
उनले शुरुशुरुमा सरोकार समुहले अनुगमन गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको उपस्थिति न्यून हुने गरेको बताए ।
‘पहिले नियमति अनुगमन गर्ने गरिएको थिएन’ समुहका संयोजक रामसिंहले भने– शिक्षा सरोकार समूह गठन भएसंगै साप्ताहिक नभए पनि मासिक रुपमा अनुगमन गर्ने गरेका छौं । उनले आमा समूह तथा विभिन्न समूहसंग सहकार्य गरेर शैक्षिक अवस्था, शिक्षक तथा विद्यार्थीको उपस्थिति, भौतिक अवस्था र सिकाई उपलव्धीबारे अनुगमन गर्ने गरेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ उर्मा स्थित शिवगंगा आधारभूत विद्यालयका शिक्षा सरोकार समूहका संयोजक विनोद रानाले पनि विगतको तुलनामा सिकाई उपलब्धीमा धेरै परिवर्तन आएको बताए ।
‘विगतको तुलनामा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ’ समुहका संयोजक विनादले भने– अहिले शिक्षाप्रति सबैको चासो बढेको छ । अहिले अभिभावकहरूले छोरा र छोरी नभनी सबैलाई समान रूपमा शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने ठान्ने गरेका कारण सुधार आइरहेको छ ।
उनले समूह मार्फत समाजमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि जागरणमूलक सन्देश प्रवाह गरिरहेको बताए ।
विद्यालय अनुगमनका क्रममा कक्षामा शिक्षकले कसरी अध्यापन गरिरहेका छन्, विद्यालयको अवस्था कस्तो छ, केकस्ता समस्या छन् ? भन्ने विषयमा सबै सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने गरेको संयोजकद्वय रामसिंह तथा विनोदले बताए ।
‘विगतमा शिक्षकहरू नियमित रूपमा स्कूल आउदैनथे, हामीले शिक्षा सरोकार समूहमार्फत नियमित रुपमा अनुगमन गर्न थालेपछि शिक्षक तथा विद्यार्थीको उपस्थिति नियमित हुन थालेको छ’ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ शान्तिकटानस्थित समैजी आधारभूत विद्यालयको शिक्षा निगरानी समूहकी सदस्य गुल्मी चौधरीले भनिन्– अहिले पढाईको स्तर राम्रो भइरहेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जलघुस्रा स्थित जनकल्याण प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा सरोकार समूहका संयोजक तारादेवी सार्कीले पछिल्लो समयमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुनुका साथै शिक्षक विद्यार्थीमा समेत परिवर्तन आएको बताइन् ।
संयोजक तारादेवीले कक्षामा शिक्षकहरू कसरी पढाईरहेका छन् ?, विद्यार्थीलाई पिट्छन् कि पिट्दैनन् ?, नास्ताको व्यवस्था कस्तो छ ? विद्यार्थीहरू पढिरहेका हुन्छन् अथवा कक्षा बाहिर हुन्छन् ? भन्ने पक्षमा अनुगमनका क्रममा अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने गरेको बताइन् ।
‘विगतमा बालबालिका धेरैजसो विद्यालय जान नै मान्दैनथे, कक्षाकोठामा बस्ने राम्रो व्यवस्था थिएन’ उनले भनिन्– अहिले बस्ने व्यवस्था राम्रो बनाइएको छ । शिक्षकहरू नियमित रूपमा विद्यालय आइरहेका छन् । कतिपय अभिभावकले बोर्डिङ स्कूलबाट निकालेर आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् ।
शिवगंगा आधारभूत विद्यालयका शिक्षक जुहारीलाल चौधरी पनि शिक्षा सरोकार समुहका सदस्यहरूको नियमित अनुगमनले बिद्यार्थी र शिक्षक सक्रिय भएको स्वीकार गर्छन् ।
उनले सरोकार समुहका सदस्यहरू विद्यालयमा अनुगमनका क्रममा आउँदा विभिन्न पक्षमा जानकारी लिने गरेको बताए । ‘समुहको निगरानीले शिक्षक र विद्यार्थीलाई सत्रmिय बनाएको छ’ उनले भने ।
जनकल्याण प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लिखराम चौधरीले सरोकार समुहको नियमित अनुगमनले पढाईको गुणस्तर सुधारका लागि थप बल पुगेको बताए ।
फाया नेपाल र एक्सन एड नेपालको साझेदारीमा ‘प्रगतिशील स्थानीय स्रोत परिचालनद्वारा गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्धन परियोजना’ ले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५, १६ र १७ (साविकको फूलबारी, उर्मा र हसुलिया गाविसका) ३० वटा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षा सरोकार समूह गठन गर्दै शैक्षिक सुधारका लागि काम गर्दै आएको छ ।